Oduu OMN: (BOOREE, Oromiyaa, Waxabajjii 20, 2017) – Godina Jimmaa aanaa – Kichuu
Oduu OMN: (BOOREE, Oromiyaa, Waxabajjii 20, 2017) – Godina Jimmaa aanaa
Oduu OMN: (BOOREE, Oromiyaa, Waxabajjii 20, 2017) – Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa ganda Booree jedhamu keessa lafti qonnaan bultoota heektarri shantamni (50’n) abbootii qabeenyaaf bifa inveestimeentii kennamuun rakkoo guddaaf akka isaan saxile qonnan bultoonni aanichaa dubbatan.
Jiraataan godina Jimmaa aanaa saqqaa coqorsaa ganda Booree jedhamtu irraa dubbisne akka OMN’f himanitti, mootummaan wayyaanee lafa keenya yeroo dheeraaf irraa fayyadamatti ture fi bultoo keenyaa ittin mo’achuuf akkasumaas ijoollee keenya itti barsifachudhaaf maddaa galii taasifachatti ture naa harka saame jira jechuun komatan.’’lafti nuu harka fudhatame kun waggootaa dheeraaf irraa fayytadamaa lafa turedha. Lafti kun kan inni aragmu godina Jimmaa aanaa saqqaa coqorsaa ganda Booree jedhamtutidha.’’
Akka namni kun himanitti, dhimma kana irratti mootummaan wayyaanees tahe qaamonni bulchiinsa naannoo keenya jiran, waan nuu marisiisaaniis tahe akka furmaatatti nuuf dhiyeessanii hin qabanii, akkasuman lafa keenya darbarsanii ijaarsaa warshaa Chaayinaaf kennuu isaanii nuti himan jedhu.
Gochaan kun immoo kan inni agarsiisu, mootummaan kun lafa keenya irratti nu warreen gibiraa itti kaffalaa jiruun olitti ol’aantummaa qabachuus kan ifatti mirkanneessadha, kun immoo abbaa irrumaa sirnicha ibsa jechuun dhimmicha hadheeffatani balaalleeffatu.’’ Lafti keenya humnaan nu harka fudhameera. Akka dhaggeenyutti warshaan kun warshaa uuffata, warshaa kophee fi waan hedduu akka qabudha.’’
Beenyaan lafa keenyaaf hanga tahe nuuf kaffalame jira kan jedhan namni dubbisne kun, haa tahu garuu beenyaan nuuf kenname gaha miti jechuunis OMNtti himaniru. ‘’Waggaa dheeraa qabeenyaa itti fayyadamatti ture, lafa keenya dhabne jira, harka keenya duwwaa gale jira. Beenyaan nuuf kenname jira garuu waan faayidaa qabu miti. hedduu gaddine jira.’’